Etu esi enweta weebụsaịtị site na email? | Site na Linux
Etu esi enweta weebụsaịtị site na email?
Enwere ọtụtụ ọrụ na-enye anyị ohere ịnweta weebụsaịtị site na email. Nke a bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na anyị enweghị intaneti zuru ezu. Yak ise ndusụk mmọ.
1 Weebụ Web2PDF
3 Rumkin webụsaịtị
Dị ka aha ya na-egosi, ihe ị na-eme na ọrụ a bụ zitere anyị weebụsaịtị anyị chọrọ ịhụ na PDF. Iji jiri ya, naanị ị ga-eziga ozi na adreesị:
Na URL saịtị ahụ anyị chọrọ ịhụ n'okwu ahụ.
Ọrụ nke anyị na-eji ọtụtụ, karịsịa n'ihi na ọ na-enye anyị ohere ibudata ụfọdụ ụdị faịlụ. Ihe jọgburu onwe ya maka ndị na-enweghị ịntanetị bụ na ha agaghị enwe ike iji ọrụ a ma ọ bụrụ na ha edeghị aha mbụ na saịtị nke Flexamail.
Iji jiri ya ziga ozi na adreesị:
Ọrụ a achọghị ndebanye aha ma zitere anyị saịtị ahụ na faịlụ abịakọrọ na usoro ya niile. Iji jiri ya ziga ozi email na:
Anyị kwesịrị itinye n'okwu a:
Ha abụghị ihe niile ha bụ, mana ha niile bụ ihe ha nọ ma na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị maara onye ọzọ, hapụ nkọwa na nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Etu esi enweta weebụsaịtị site na email?
Ihe 9 kwuru, hapụ nke gị
Ọ dị ezigbo mma! Ma eleghi anya ị nwere ike ịkọwa m ajụjụ:
"Ọ bụrụ na Google egbochila ha, olee otu ha ga-esi nweta ozi ọ bụla site na e-mail?"
Daalụ nke ukwuu maka ezi vibes nke mgbe niile ...
Iji ozi ozi ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ ka mma ịghara ikwu banyere nke a ebe a, kedu ka ha si nwee ike imechi saịtị hahahaha
Oge ọ bụla m malitere ịchọ ihe, nkịtị normal ị nwere ya ebe a hahaha
HAHAHAHA ntakịrị ihe niile mana ọ bụ ezigbo mma 😀
Edemede gị mara ezigbo mma, daalụ maka m ọ ga-aba nnukwu uru n'ihi na m bi na mba ebe ọchịchị aka ike (Cuba) nwere nke na-egbochi ọtụtụ mmadụ ịbanye na ịntanetị, ọ bụrụ na ọ bụghị nsogbu na ị nwere ike ịgwa m ọtụtụ adreesị ma ọ bụ ọrụ nke ahụ pịnye (nke dị ugbu a) ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala otu saịtị ebe ndepụta nke ọrụ ndị ahụ dị ugbu a na-apụta
ịmakụ ma kelee gị email m: lacedaista@yahoo.es
IP gị esighi na Cuba.
compadre, na onwere onye choro ichota nsogbu, gini kpatara itinye ochichi ma oburu na nka bu imuta ma nwekwa onu? Ma post a bụ maka nke ahụ, iji nyere ndị anyị nọ na mba ọ bụla aka isiri ike ịbanye na ntanetị, ihe ọ bụla kpatara ya, n'ihi na onye ahụ ahụbeghị ọnụ ọgụgụ njegharị n'ụwa niile ebe ndị bara ọgaranya na Dika Afrịka gbara ndi nke ikpeazu n’otutu n’ime obodo ha n’enweghi ntaneti INTERNET n’ime onu ogugu ndi mmadu bi na ya ma ha bu ndi butere nsogbu ya nile na mpaghara Afrika a.
N'aka nke ọzọ, onyinye enyi m dị mma, m bi na Cuba ma enwere m nsogbu na njikọ m nwere ike ịnweta dị nwayọ nwayọ, ọ bụ ya mere ọ na-ejekwara m ozi n'ihi na ọtụtụ peeji anaghị emeghe kpamkpam ma ọ bụrụ na ha nwere eserese, ọbụlagodi blog a Guys na-eme nke ọma na ezigbo ọrụ.
A na-enwe ekele maka ndị nọ ná mkpa nke ụwa a
Ndewo, post a na-atọ ụtọ, ruo ugbu a ọ bụ nke nyere m nsonaazụ kacha mma, ana m ekele gị nke ukwuu maka ozi ahụ. Biko, ọ bụrụ na ọ bụghị nsogbu, ị nwere ike ịgwa m ọrụ ndị dị n'oge a na mgbe ị na-eziga njikọ na ibe weebụ site na iji email m, ha ga-eweghachi peeji a na usoro PNG - JPG, dị ka a ga - asị na ọ bụ nseta ihuenyo. Ana m ekele gị nke ọma na echere m azịza gị.
Blam, onye na-agụ RSS dị oke ọkụ
Kedu mba ole Linux si enweta nleta kachasị? + OS + Nchọgharị